Nhau - CHIDZIDZO CHIDZIDZO CHOKUDZIDZA PAPA
YOKUDZIDZA PAPER DZAKATEVEDZANA
Kudhinda bepa rinonyanya kusanganisira C1s / C2s yakavharwa art pepa / couche bepa ,, c2s hunyanzvi bhodhi / yakakwira yakawanda hunyanzvi bhodhi, woodfree offset bepa / chisungo bepa, isina kabhoni bepa / NCR bepa, mwenje huremu hwakafukidzwa bepa / LWC bepa, inozvinamatira .
C2s Art bepa rudzi rwekuputirwa bepa.Zita zvakare secouche pepa.Iine mhando mbiri dze glossy uye matt.Premium yekudhinda bepa rakagadzirwa kubva pazasi bepa nechena kuputira.Iyo yakaputirwa rimwe chete divi kana kaviri divi.Rose divi chena Grammage izere 80g, 90g, 100g, 115g, 120g, 128g, 135g, 150g, 157g, 200g, 250g. Inonyanya kushandiswa semagazini, bhuku, katalog, periodicals uye chitupa.
C2S ART BHODHI / YAKANAKA BHUKU ART BHODHI
C2s hunyanzvi bhodhi rudzi rwakavezwa pepa.Also ziva seyakavharwa bhodhi, bristol bepa.Iyo inogadzirwa kubva yepasi pepa ine chena kupfeka. Rakafukidzwa ruviri divi.Rutivi rwunovaima uye ruchena Iyo yakazara girama iri 210g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g.Iyo inoshandiswa semurume sevharo rebhuku, kadhi rekukwazisa, kadhi zita, karenda uye katarogu.
WOODFREE OFFSET YOKUDZIDZA PAPA
Woodfree offset yekudhinda mapepa rudzi rweisina kuvharwa bepa.Zita zvakare sebhendi bepa.Iyo inokodzera kumhanya-mhanyisa offset kudhinda uye muhombe kudhinda. Iyo grammage chifukidzo 55g, 60g, 65g, 70g, 75g, 80g, 90g, 100g, 120g, 140g, 160g, 180g, 200g, 230g. Iyo inonyanya kushandiswa kune offset-yakadhindwa bhuku, chinyorwa bhuku, tsamba, kushambadzira mabrochure uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
Carbonless bepa rudzi rwekuputirwa bepa. Rimwe zita seNCR pepa / Autocopy bepa.Iine zvikamu zvitatu zveCB / CFB / CF.CB zvinoreva kuputirwa kumashure.CFB zvinoreva kuputirwa kumberi uye kumashure.CF zvinoreva kuputirwa kumberi. Iyo grammage inovhara 45g, 50g, 55g, 60g, 70g, 75g uye 80g.Iyo inonyanya kuguma kushandiswa ndeyekudhinda invoice, pepa rebhangi, waybill, yekutengesa zvinyorwa uye komputa fomu yekudhinda mapepa.
MUDZIMAI WEMAI WAKADZIDZWA PAPA
Chiedza uremu chakaputirwa bepa rudzi rweakaputirwa bepa.Izita pfupi reLWC bepa.Iyo inonyanya girama iri 48g, 50g, 56g, 58g, 60g, 64g, 70g, 80g.Iyo inoshandiswa kudhinda magazini, bhuku, pepanhau, chitaridzi uye kushambadzira kapepa.
CHETE-CHINONANGANIRA CHETIKI PAPA
Yega-yekunamira chinamirwa bepa rudzi rweanoumbwa mapepa.Iyo inogadzirwa nezvikamu zvitatu zvechiso zvinhu, glue uye kuburitsa bepa. Chiso zvinhu zvatingakwanise kupa High-glossy bepa, semi-glossy bepa, offset bepa, thermal bepa, PP firimu zvinhu uye PVC zvinhu.Tinogona kupa inopisa inyauka guruu, mvura base gundi uye mafuta glue.For iyo kuburitswa isu tinogona kupa yero / chena kuburitsa mapepa uye girazi girazi. chitaridzi, uye mushonga chitaridzi.
Post nguva: Sep-13-2021